Somaliland oo War Kulul kasoo saartay inay taageerto Al shabaab & Daacish – XAMAR POST
Kulan deg deg ah oo ay isugu yimaadeen Golaha Wasiirrada Maamulka Somaliland islamarkaana uu shir guddoominayay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa looga hadlay colaadda Tukarraq iyo eedeeyn ay shalay Puntland u jeedisay Maamulka Somaliland.
Kulanka oo ka dhacay Madaxtooyada Somaliland waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah Wasiirrada Maamulka Somailand,madaxweynayaashii hore ee Somaliland soo maray qaarkood iyo xubno kale.
Kulanka kaddib ayaa warbixin laga soo saaray lagu sheegay in Somaliland ay difaacaneyso dhulkeeda islamarkaana dagaalkii 15kii Bishan ka dhacay Tukarraq uu ahaa duullaan lagu qaaday dhulka Somaliland.
Waxaa kale oo lagu sheegay in Somaliland ay beenisay eedeyn shalay ka soo baxday Maamulka Puntland oo la xiriirtay in Somaliland ay taageerto Al-shabaab iyo Daacish oo ka dagaallama Buuraleyda Galgala.
Waxaa ay Somaliland sheegtay in aysan jirin eedda Puntland islamarkaana uu caalamka Somaliland ku yaqaanno in aysan taageerin waxa loogu yeero argagixisada.